के गर्लान् ओली ? यस्ता छन् तीन बिकल्पहरू – onlineyuba
के गर्लान् ओली ? यस्ता छन् तीन बिकल्पहरू
२०७७ मंसिर २४, बुधबार १८:००
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भएनन् । ओली बैठकमा उपस्थित नहुँदा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्छ बस्दैन भन्ने थियो । तर बैठक बस्यो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो कुरा राखे । बैठकमा दुबै अध्यक्षका प्रस्ताव पेश भए । दुबै अध्यक्षका प्रस्ताव अध्ययन गर्न भनेर एक हप्ताको समयम स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई दिइएको छ । अब बैठक आगामी बैठक २८ गते बस्ने छ । तर नेकपामा बैठक बसेपनि अवस्था भने सहज छैन । पार्टीको विवाद अध्यक्षद्वयमा नै सबैभन्दा बढी छ । पार्टी अध्यक्ष नै आमुन्ने–सामुन्ने भएपछि विवाद हल गर्न पनि त्यति सहज छैन । नेकपामा वारपारको अवस्था आउने गरी वैशाख ८ गतेबाट विवाद सुरु भएको थियो । विवादको सुरुवात सरकारले दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश थियो । पार्टीसँग कुनै पनि छलफल नगरी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याए । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले त्यहि दिन जारी गरेपछि विवाद झन् बढ्यो । ओलीले ल्याएको अध्यादेश भलै चार दिनमात्र टिक्न सक्यो । तर ओलीका लागि प्रत्युत्पादक नै साबित भयो । अध्यादेश ल्याएपछि ओलीले फिर्ता लिन त लिए तर उनको लागि सहज वातावरण भने बनेन । ओलीको उक्त कदमपछि अर्को पक्ष उनीमाथि भारी हँुदै गएको छ । यो बिचमा ओलीले आफूमाथि आइलागेका केहि समस्या अस्थायी रुपमा हल गरेपनि स्थायी रुपमा भने उनीमाथि संकटमाथि संकट कम भएन, झन् बढ्दै गए । ओलीले बैठक छोड्ने र बैठकमा उपस्थित नै हुन नसक्ने अवस्थासम्म आए । ओलीले त्यति हुँदा पनि विस्तारै आफू अनुकुल वातावरण बनाउन सफल भए । तर ओली सधंै चर्चा र विवादमा आइरहन मन पराउँछन् । गत वैशाखमा आफैले निम्त्याएको संकटबाट पार पाउन चार महिना लाग्यो । तर पनि ओली करेक्सन नभएको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । ओलीलाई अहिलेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सहज अवस्था छैन । त्यहि भएर उनी आफ” बैठकमा उपस्थित नभएपनि पत्र लेखेर पठाएका छन् । पत्रमा पनि उनको मनोदशा झल्कन्छ । उनले पत्रमा २६ भदौको प्रसंग उठाएका मात्र छैनन् त्यसैगरी मलाई बचाइदिनु हुन्छ भन्ने आशा रहेको समेत घुमाउरो भाषामा अनुरोध गरेका छन् । उनको कुरा स्थायी कमिटीबाट पास नहुने अवस्था आएमा ओलीले के गर्लान् भन्ने सबैमा चासोको विषय बनेको छ ।
ओलीका सम्भावित कदमहरु
एक पद रोज्ने
एक व्यक्ति एक पदको कुरा नेकपामा सुरुबाट नै उठ्न थालेको हो । अझ कार्यकारी भूमिकामा भएका नेताहरुलाई अर्को कार्यकारी भूमिका भएको पद नदिने कुरा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेशका इन्चार्ज, अध्यक्ष सचिव बनाउदादेखि नै उठाउँदै आएका थिए । तर उनको कुरा खासै बहसको विषय बनेको थिएन । तर समयले त्यहि कुरामा ल्याएर नेकपालाई उभ्याएको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउछिन् । उनले भनिन् ‘पार्टीको विधानमा भएको एक व्यक्ति एक पद लागु गर्न धेरै ठूलो लडाई लड्नु परेको छ । अब ओलीले एक पद रोज्नुपर्छ । कसैले काम नै नपाउने कसैले दुई तीन किसिमको जिम्मेवारी पाउने भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुँदैन ।’ ओलीले वैशाखमा आफूमाथि आएको संकट केहि नेता फकाएर टारेका थिए । तर अहिले उनको त्यो रणनीतिले काम गरेन । उनी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा छन् । उनले मध्यमार्गी बाटो अपनाउने हो भने एक पद रोज्नुपर्ने नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
बहुमतले गरेको निर्णय स्वीकार्नु
ओलीले आफूले नै मध्यमार्गी बाटा नअपनाए बहुमतको निर्णय स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाको विधानमा सहमति र बहुमतीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले नेकपाको विवाद जुन बिन्दुमा पुगेको छ त्यो सहज रुपमा मिल्ने देखिदैन । यसका लागि नेताहरुले नै एक–एक कदम पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि नेताहरु नै तयार देखिदैनन् । नेताहरुका लिखित प्रस्ताव अध्ययन गर्दा पनि आफूले सबै ठिक गरेको तर अर्का नेताले नै सबै कुरा बिगारेको आरोप प्रत्यारोप छ । जब कि पार्टीमा नेतृत्व मिल्ने हो भने आफ्नो आत्मआलोचना गर्नुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । ओलीले एक व्यक्ति एक पदको अहिलेको मागलाई सम्बोधन गरेन भने उनले जारी स्थायी कमिटी अथवा पुस ५ मा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यो स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । तर ओली बहुमत अल्पमत मान्ने पक्षमा छैनन् । उच्च स्रोतका अनुसार शनिबार बसेको सचिवालय बैठमा पनि अल्पमत बहुमतको कुरा कार्यन्वयन नगर्ने बचन पाएपछि उपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतले भन्यो ‘ओली कमरेड शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा पनि अल्मपत र बहुमतको निर्णय नहुने ग्यारेन्टी भएपछि आएका हुन । स्थायी कमिटीमा पनि त्यही खोज्नु भएको होला । तर यहाँ यस्तो नहुने देखिन्छ ।’ ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई हुल्लडबाँजको संज्ञा दिएका छन् । ओलीले स्थायी कमिटीका निर्णय र साउनमा बनाएको कार्य दलले दिएका सुझावलाई पनि लत्याएर एकलौटी रुपमा तीन जना मन्त्री थपेका थिए । विभिन्न देशका राजदूतहरु पनि नियुक्ति गरेका थिए । उक्त कदमपछि नेकपामा ओलीलाई जसरी पनि एक पदबाट हटाउनुपर्ने माग पुनः जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय स्वीकारेर जानुपर्ने हुन्छ । स्थायी कमिटीको बैठकले अल्पमत बहुमतमा गयो भने त्यो मान्ने हुदैन । अल्पमत अल्पमतबाट जे निर्णय गरेपनि आफूहरु नमान्ने स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल बताउछन् । उनी भन्छन् ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई अध्यक्ष कहाँ छन् ? त्यो यहाँ भयो । महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाने भनेको छ, अल्पमत बहुमतको निर्णय मान्य हुँदैन ।’
भदौ २६ मा फर्कने
ओलीले स्थायी कमिटीलाई २६ भदौको जस्तै निर्णय गर्नु हुने छ भन्ने आशामा छु भन्ने आसयको पत्र लेखेर पठाएका छन् । तर नेकपाका नेताहरु भने २६ भदौको निर्णय ओलीले नै लत्याएको आरोप लगाउँछन् । भदौ २६ मा ओलीका दुबै पद बचेका थिए । जब कि वैशाख १७ बाट उनले दुबै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको थियो । ३० साउनमा कार्यदल बनाउन दुबै अध्यक्ष राजी भए । कार्यदलले एक हप्तामा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा दुबै अध्यक्षको कार्य विभाजनदेखि केन्द्रको मन्त्रीमण्डल र प्रदेशका सरकारका मुख्यमन्त्रीसम्म हेरफेर गर्न सुझाव दिएको थियो । तर ओलीले मन्त्रीमण्डमा आफूखुशी तीन जना मन्त्री थपे । उनले राजदूत पनि एकलौटी रुपमा नियुक्ति गरे ।
अब २६ भदौको निर्णयमा फर्कन नसकिने ओली माधवकुमार नेपाल समुहका नेताहरु बताउँछन् । २६ भदौको निर्णयमा जानु नै अहिलेको नेकपाको विवाद समाधान हुने ओली निकट मानिने मण्डल बताउछन् । उनले भने ‘भदौ २६ को निर्णय मान्न सबै तयार हुनुपर्छ । त्यो नै अहिलेको विवाद समाधानको मिलन बिन्दु हो ।’ तर प्रचण्ड नेपाल समुह भने ओलीले भदौ यता मनमानी रुपमा गरेका सबै निर्णय सच्याउनु पर्ने अनि मात्र बहस हुन सक्ने बताउँछन् । यदि ओलीले भदौयता गरेका विवादीत निर्णय सच्याएमा अहिलेको विवाद केहि मत्थर हुने एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनले भने ‘विवाद अन्त्य त हँुदैन बहसको नयाँ श्रृखला सुरु हुन सक्छ । पहिला ओली करेक्सन हुनुपर्छ ।’